U-Alina Kabaeva kunye nabantwana bakhe nomyeni, isithombe. Umyeni ka-Alina Kabaeva, isithombe, iindaba zakutshanje
Ubomi obufihlakeleyo obucacileyo kunye no-Alina Kabaeva
Ubomi bomntu bomnye wabantu abancinci nabaninzi abangabonakaliyo kwimidlalo yezemidlalo - u-Alina Kabaeva - unemfihlelo. Iintanethi zentlalo kunye neentengiso ze-intanethi zihlala zizaliswa ngamarhweba amasha malunga nomqeqeshi wezakhono, iindlovukazi zelizwe kunye nowayesesekela likarhulumente waseDuma. U-Alina Kabaeva kunye nabantwana - inqaku le-1, elingathinti kuphela ivila. Yaye akumangalisi. Ngoxa u-Alina Kabaeva uthe cwaka, baya kuthethwa ngaye. Kwaye kwakukho amaxesha apho u-Alina wayengenakubizwa ngokuba ngumthumo ongaqondakaliyo ...
I-Passion Kabaeva kumyeni womnye
Ngomncinci, u-Alina wayenothando lwakhe lokuqala, ekugqibeleni emva koko kwathiwa yi-Shakespeare. Wayeneminyaka engama-17 kuphela, xa isifo samsondeza kunye nomphathi wamasolitha uShavava Museliani. Inkwenkwezi enamalente, encinci kunye neentyantyambo, yawela ngokuthanda ngobuhlanya kwaye bonke bazama ukuxelela abanye okokuqala. Ngomdla kwaye eninzi wayethetha nabathethi beendaba, kwaye intlanganiso nganye yodliwano-ndlebe yayiyomsindo womphefumlo. Emva koko abantu abaninzi bacinga ukuba: "Ngaba ummememandla Shalva ukuba abe ngumyeni ka-Alina Kabaeva?".
Uthando luphelile ngokukhawuleza kwaye inyaniso ebuhlungu yavuleka. U-Museliani utshatile ngokusemthethweni kwaye unentombi uNana. Umlingane osemthethweni kwiphepha lesinye sezivakalisi ezinkulu zasekhaya ngokufanelekileyo "misela umlilo" amaphupha angenangqondo yenkwenkwezi yezemidlalo. Ukuvumba komlilo kwakuvelele yonke into.
Umnqobi oyinqatshiwe wamisa okwesikhashana waza wabuza i-press ukuba inenceba. Okwangoku, phantsi koxinzelelo luka-Alina Museliani watshata nomkakhe u-Olga. Iphrinta kwakhona yaqala ukuthetha ngomyeni wayo u-Alina Kabaeva. Kodwa kwakhona - Uthando lwazithandana ngokutsha. Waba ngumdlali wesenzo kunye nomzekelo u-Anna Gorshkova. Kodwa kungekudala ... Bathi u-Alina Kabayeva obeka isandla sakhe ekushabalaleni kukaAna ebomini kwipolisa yangaphambili. Ngaphezu koko, umdlali we-actress wanyamalala ngokukhawuleza kwizikrini.
Kodwa kwakhona ibali lika-Museliani neKabaeva alizange liphele ngomtshato. Babeneminyaka emihlanu bodwa baze bahlukana. Ngeli xesha, u-Alina wakwazi ukuqokelela onke amajelo angakwenzeka, ukuguqula umcimbi omfutshane kunye nomdlali webhola uMaxim Buznikin kwaye uhoxise ngokugqithiseleyo kwimidlalo enkulu. Ngelo xesha, ngowama-2007, emva kokuqhawulwa kokugqibela noMuseliani ebomini buka-Alina Kabaeva, into ebalulekileyo kakhulu yaqala.
Kwaye le "nxu lumano" yanikela ngolo hlobo lwengqondo yombhali weentatheli ukuba abafundi "baxhamle baze bacule" ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye baqhubeke bekwenza oku kube namhlanje. Ubomi bomntu u-Alina Kabaeva buphinde buvezwe ngabantu bonke, kuphela inkwenkwezi eyekile ukuthetha ngaye. Kwaye konke esikubonayo, ukuva nokufunda, kubonakala ngathi "iingcamango zasezidolophini." Kodwa umlinganiselo walezi ngcamango awukho edolophini nonke. Ngomxholo omtsha wothando uAlina Kabaeva wathetha ihlabathi lonke ...
Uthando olutsha kunye nomyeni ka-Alina Kabaeva. UShakespeare uphumla ...
Ibali elinjalo luthando aluzange lwenzeke kumdlali odlala umdlalo obalaseleyo kwihlabathi. Isahluko esitsha ebomini buka-Alina Kabaeva sanikezela ukucamngca okunjalo, intlanzi kunye nehlazo lokuba wonke umntu akanako ukuzinza kuze kube ngoku.
Kwaye isahluko esitsha sobomi saqala entwasahlobo ka-2008 ngesigxina esikhulu. "Umbhali waseMoscow" waphuma ngeendaba ezivuyisayo ngomtshato ka-Alina Kabaeva noVladimir Putin. Iintatheli zaseYurophu zinyusa ikhofi yabo yasekuseni zagijimela kwiiofisi zazo zokuhlela ukuba zixelele abafundi ukuba iindaba ezifudumeleyo. Kwaye ngokuhlwa babebuyela ekhaya baqikelele kwiziko lekhofi.
Oku kwaqhubeka iintsuku ezintandathu, kwada kwafika amagunya aphezulu kwinkqubo yokuvumisa. Umongameli waseRashiya wayehleka ngeengcamango zeendaba, ebiza ukuba ziyize. Kwaye ngaloo mini, umlawuli jikelele we-Moscow correspondent wafunda ukuba "akanakho ukuhlawula abasebenzi" kwaye wavala le ncwadi. Kwaye kwangoko, umtshato waseKabaeva noPutin waba yintetho yedolophu. Wonke umntu wayefuna ukwazi iindaba zakutshanje malunga nomlando wale thandabuzo.
Sekunjalo, uPutin noKabaeva batshatile, okanye unokufumana apha .
Oonyana baka-Alina Kabaeva. Wazala indlovukazi ebusuku ...
Unyaka udlulile emva kweqendu elichasayo, kwaye intatheli zaqala ukuthetha ngabantwana. Isiqulatho esaziwayo "sitshatile" ngabanyatheli beendaba bahlala behleli. Kodwa umshicileli awukwazanga ukuthula. Iinyanga ezili-9 zidlulile - lixesha lokubonakala kumntwana. Kwaye wabonakala - unyana kaDmitry, kuthiwa ubizwa ngokuba nguMedvedev, owayengumongameli omele. Le nguqulo ibonakale kunye nokufakelwa kweengxelo zeendaba zangezinye iintlanga, kwaye zamukelwa kakuhle kwiimidiya zasekhaya.
Iindaba zokugqibela zazixubusha ngokuphangaleleyo iminyaka emininzi ngabantu abangabonisi. "Ugciniwe" ukubonakala ngokungakhathali kwintlanga u-Alina kunye nomfana othakazelisayo (kwaze kwafuneka aphule uxolo aze athi lo ngu mntakwabo uAsenyeni). Wakhuthazwa ngokukodwa kwiphepha lokuhamba kwelinye leenqwelo ezizimeleyo ezazisa u-Alina nomntwana wakhe kuSochi ... njengoko umzalwana womlobi wacinga, kuPutin. Bafumana ubungqina bolu xwebhu lwamaphepha kwaye bahlutha izandla zabo ngokufanelekileyo.
Emva kokuqhawula ngokusemthethweni intloko ka rhu lumente, kwaqala enye ingqungquthela yamahlebezi. Amajelo angaphandle aqinisekisa ukuba uAlina Kabaeva ngoNovemba 2013 wazala intombi waza wahlala nezingane ezimbini eSochi. Ukuhlaziywa kwenkxaso-mali rhoqo kwiziko lekhofi kwenzeka kwiiOlimpiki. Emva koko abafotshane beefoto babhala ngomunwe wendandatho yokubandakanya u-Alina. Kwiintsuku ezintandathu kamva, umkhonto womtshato wabonakala kwiqabane likaVladimir Putin, kwaye ezi ndaba zavusa umxhelo.
ULududlala uPutin washada kwakhona. Funda iindaba zakutsha apha .
Kwiminyaka emibini kamva, izinto ezinqwenelekayo azithinteli, kwaye ubomi bobucala bomfazi omhle kusekho ngomlomo wonke. U-Alina Kabaeva, abantwana, umyeni, umtshato - ukuxoxwa kwenkohlakalo kwiindawo zekhofi ziyaqhubeka. Kwaye sinokubukela kuphela iindaba zakutshanje.
Ngaba uEkaterina Tikhonova intombi kaPutin? Iinkonzo kunye neNgqungquthela
UVladimir Putin no-Alina Kabaeva: iindaba zakutshanje kwizithandane zaseYurophu ezithandekayo 2017
Ubomi bomntu womdlali we-actress Xenia Lavrova-Glinka. Iifoto eziqhelekileyo zabayeni nabantwana
Ubomi bomntu kaTatyana Vasilyeva: usapho, abantwana, ubudlelwane namadoda. Ifoto ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kweplastiki
Zingaphi iincwadi ezenziwa nguMaxim Galkin (uPugachev akabala)
UMaria Shukshina, ubomi bomntu
Indlela yokuphepha ukungquzulana nabahlobo
Yiyiphi indoda ecebileyo efuna umfazi ngomtshato
Izinto eziphambili ezinomdla: izinto zokubhabisa
Indlela yokubuyisela iimvakalelo, ukuba wayeka ukuthanda?
Ukufunda indlela yokwenza umuthi
Iingcebiso Zomntu Ngeenwele Zomileyo
Isiseko sokwenza: indlela yokukhetha nendlela yokufaka isicelo
Inkcubeko yeVedic malunga nokunakekelwa kweenwele
Umzimba wesifa, intlungu yesisu
Indlu yendlu ye pahir
Ucoceko lwezondo zesini
Iintlobo ezithandwa kakhulu kwizinto zokuzilibazisa
Unyango lwe-cellulite kunye namafutha abalulekileyo
Iziphuzo zeCarbonated nge juice yeziqhamo